Ihe ndị chọrọ maka nhazi okirikiri nhọrọ ukwuu maka elu igwe na-ere ahịa
1. Background Wave soldering na-etinyere na kpụ ọkụ n'ọnụ site gbazere solder na atụdo nke components. N'ihi ngagharị ngagharị nke ebili mmiri na PCB yana “nhịahụ” nke solder a wụrụ awụ, usoro ịgbanye ebili mmiri dị mgbagwoju anya karịa ịgbado ọkụ. Enwere ihe achọrọ maka pin...
6 Oke nke igwe na-ere ahịa ebili mmiri
Igwe eji agbado ebili mmiri a na-ahọrọ na-enye usoro ịgbado ọkụ ọhụrụ, nke nwere uru na-enweghị atụ karịa ịgbado ọkụ akwụkwọ ntuziaka, igwe ịgbado ọkụ ọdịnala na oven reflow site na oghere. Otú ọ dị, ọ dịghị usoro ịgbado ọkụ nwere ike zuru okè, na nhọrọ ife soldering nwekwara ụfọdụ "nkwụsị" d ...
Gịnị bụ ihe dị iche n'etiti Laser Welding na reflow Welding?
Okwu mmalite nke reflow oven Reflow oven na-eji flux mkpuchi, wee preheating sekit osisi/arụ ọrụ flux, na mgbe ahụ na-eji ịgbado ọkụ nozzle maka ịgbado ọkụ mode. Ọdịnala igwe ịgbado ọkụ nke ọdịnala kwesịrị iji welding point-to-point maka ebe ọ bụla nke bọọdụ sekit, yabụ enwere ọtụtụ wel...
Kedu uru dị na teknụzụ nhazi SMT?
SMT nhazi usoro: Mbụ n'elu e biri ebi sekit osisi solder mkpuchi solder mado, ọzọ na SMT igwe components nke metallized ọnụ ma ọ bụ pin n'ụzọ ziri ezi na bonding mpe mpe akwa nke solder mado, mgbe ahụ na-etinye PCB na components na reflow oven dum kpụ ọkụ n'ọnụ na-agbaze. pas solder...
site admin na 21-11-18
Ụdị igwe na-ere ahịa nke ebili mmiri 1. Nkpuchi na-ahọrọ ebili mmiri na-ahọrọ ihe mkpuchi bụ usoro ịgbado ọkụ nke na-eji ihe mkpuchi kpughee ebe ịgbado ọkụ na-ekpuchi ebe ndị na-adịghị mkpa ịgbado ọkụ. A na-eji ya n'ọtụtụ ebe ma dabara adaba maka mmepụta obere obere na ọkara ...
Olee otú ịghọta conductive oghere plọg usoro?
N'ihi na SMT osisi, karịsịa maka BGA na IC pasted na conduction chọrọ ga-agbapụ, nkwụnye oghere convex concave gbakwunyere ma ọ bụ mwepu 1 mil, enweghị ike inwe ndu oghere onu na red tin, ndu oghere bụ Tibet beads, iji zute. ahịa chọrọ, na-eduzi nkwụnye oghere usoro bụ multif ...
SMT AOI Machine Description Sistemụ AOI bụ usoro nyocha na nhazi ngwa anya dị mfe jikọtara ya na igwefoto, lenses, isi ọkụ, kọmpụta na ngwaọrụ ndị ọzọ a na-ahụkarị. N'okpuru ìhè nke isi iyi ọkụ, a na-eji igwefoto eme ihe maka foto ozugbo, mgbe ahụ, a na-achọpụta ya site na com ...
123456 Ọzọ > >> Peeji nke 1/16